Nghiệm thu tiếng anh là gì? Quy trình, điều kiện tiến hành nghiệm thu | Anybook.vn - Anybook
Nghiệm thu tiếng anh là gì? Quy trình, điều kiện tiến hành nghiệm thu | Anybook.vn
Araka ny hevitrao, inona no atao hoe fitsapana fanekena? Ary inona no atao hoe fitsapana fanekena anglisy? Efa naheno an’ireo teny ireo ve ianao? Inona no santionany amin’ny minitra fitsapana amin’ny teny anglisy? Noho izany, ny 123job dia hanambara aminao ny fampahalalana momba ny fitsapana fanekena anglisy sy tatitra momba ny fanekena.
Raha miasa amin’ny sehatry ny fanorenana ianao dia tsy maintsy efa nandre ny teny anglisy fanekena fitsapana. Inona àry no azonao amin’ny fitsapana fanekena? Ary ny teny Inona no dikan-teny anglisy amin’ny transcript?? Fantatrao ve ny minitra fanekena ary raha izany, inona ny santionan’ny minitra fanekena anglisy?
1 I. Inona no atao hoe fanekena anglisy
2 II. Santionany fehezanteny momba ny firaketana andrana fanekena anglisy
3 III. Zavatra vitsivitsy tokony ho fantatra momba ny fitiliana fanekena araka ny dingana
3.1 1. Fomba fitiliana fanekena manokana
3.2 2. Inona no antontan-taratasy takiana amin’ny fanekena ny tetikasa?
4 IV. Fepetra hanaovana ny andrana fanekena ny tetikasa
5 V. Fanamarihana ho fantatra rehefa manao ny fanadinana fanekena
I. Inona no atao hoe fanekena anglisy
Andeha aloha hianatra momba ilay andian-teny Inona no atao hoe fitsapana fanekena? Ny anarany amin’ny teny anglisy dia inspection, ary raha amin’ny endrika matoanteny dia “mandinika” na “mijery sy maka”. Ireo voalaza etsy ambony ireo no fomba roa fampiasa matetika indrindra hahafantarana ny atao hoe fitsapana fanekena. Na izany aza, ankoatry ny teny etsy ambony, amin’ny sehatra hafa, inona ny fitsapana fanekena, ka afaka mampiasa teny hafa toy ny:
– Ohatra, eo amin’ny indostrian’ny injeniera, ny atao hoe fanekena, dia ny hoe: manaiky, manaiky, manamarina, na mandray…
– Eo amin’ny tontolon’ny fandraharahana, inona no atao hoe andrana fanekena, dia mety ho: fanaterana, fandinihana ary fandraisana, na fitsapana fitsirihana…
Inona no atao hoe test teny anglisy?
Inona anefa no atao hoe fitsapana fanekena amin’ny teny anglisy, io no teny mahazatra indrindra eo amin’ny sehatry ny fanorenana, ka ny fanekena ny asa fanorenana nadika amin’ny teny anglisy dia azo soratana amin’ny hoe “inspection site” na “inspection site”. dia “inspection project” na ” hanamarina sy haka ireo tranobe”. Amin’ity tranga ity, dia tsy hampiasa ny matoanteny “manana” isika mba hanoloana ny matoanteny “mandinika”. Satria amin’ny ankapobeny dia ampiasaina amin’ny asa kely sy mora vita ny “mameno”, ny teny hoe “manara-maso” dia hafa satria mampiseho ny dingana sy ny fahasarotan’ny asa, ary koa ny fanaovana fitiliana fanekena. Noho izany, ny teny hoe fanekena amin’ny teny anglisy dia teny manokana malaza amin’ny indostrian’ny fanorenana any Vietnam, satria mikendry ny hifanakalo vaovao amin’ny sehatra mora.
Eo am-pikarohana asa sy fangatahana asa eo amin’ny sehatry ny fanorenana dia mety tsy maintsy mifandray amin’ny andian-teny hoe “inona no fanekena” ary indrindra raha miara-miasa amin’ny orinasa vahiny io vondrona io. ary ny fomba fandraisana azy amin’ny teny anglisy dia azo antoka fa ho fitaovana hanampy anao hampiaiky volana ny mpampiasa. Amin’ny ankapobeny, mila mahatakatra ianao Fitsapana fanekena anglisy Inona izany, ankoatra izany, miditra lalindalina kokoa amin’ny asa fanekena ary asehoy ny haavon’ny fahalalanao?
Ankoatr’izay, ny fanekena ny kalitaon’ny asa dia heverina ho dingana lehibe amin’ny fanorenana, satria indrindra ho an’ny tetikasa lehibe dia hanampy ny tetikasa ny fanekena ny kalitao. , azo antoka fa hisy vondrona eo ambanin’ny asa fanekena ho avy ary hanao fanadihadiana momba ny kalitao. Noho izany, araka ny hevitrao, inona no fepetra ianteheran’izy ireo matetika amin’ny vondron’ny fanekena mba hanombanana fa nahatratra ny kalitao ilay entana? Matetika ny fanaraha-maso sy ny fanekena ny asa fanorenana, dia ahitana ny tena asa toy ny: fanaraha-maso ny fitaovana, ny singa sy ny fitaovana; Na ny fandaminana ny dingana fanekena…
READ Mục tiêu dài hạn là gì? Đặt mục tiêu dài hạn hiệu quả | Anybook.vn
Avy eto dia azonao atao ny mahatakatra ny atao hoe fitsapana fanekena ary inona ny fanekena anglisy. Ny fitsapana fanekena dia ny dingan’ny fisafoana, ny fanekena ary indrindra ny fisafoana ny asa aorian’ny fanorenana. Na azo takarina ny atao hoe test de acceptance anglisy, dia ny fitsirihana ny kalitaon’ny asa alohan’ny hampiasana azy.
Amin’ny ankapobeny, inona ny fampiharana ny dingana fanekena amin’ny teny anglisy, ny asa dia horaisin’ny manampahefana mahefa, mifototra amin’ny sary sy ny fandrefesana ny kalitaon’ny asa efa namboarina hatrizay, mba hahafahana manao fanombanana hanapahana raha manana kalitao sy teknika ampy hampiasaina io asa io.
Jereo bebe kokoa: Famintinana ny minitra momba ny fanadiovana trosa izay tokony ho fantatry ny kaonty
II. Santionany fehezanteny momba ny firaketana andrana fanekena anglisy
Eto, ny 123job dia handefa amin’ny mpamaky izay fehezanteny mahazatra ao amin’ny tatitra andrana fanekena anglisy, tatitra momba ny fanekena santionany inona ny teny anglisy:
Ny voalohany dia ny “Ny roa tonta dia manaiky ny hanao sonia ny fanolorana sy ny minitran’ny fitaovana toy izao manaraka izao” izay adika amin’ny teny vietnamiana hoe “Ny roa tonta dia hanaiky ny hanao sonia ny minitra fanolorana sy fanekena ny fitaovana, indrindra ny”.
Manaraka izany dia Mangataka fanamboarana ny lesoka alohan’ny hanombohan’ny asa manaraka, izay adika amin’ny teny vietnamiana hoe Mitaky fanamboarana ny lesoka alohan’ny hirosoana amin’ny asa manaraka.
Santionany fehezanteny momba ny firaketana andrana fanekena anglisy
Farany, ny solontenan’ny sampan-draharaham-panjakana miandraikitra ny fitantanana ny kalitaon’ny tetik’asa fanorenana (araka ny delegasiona nomena alalana) vavolombelon’ny fanekena nadika tamin’ny teny vietnamiana dia ny solontenan’ny masoivohon’ny fitantanana ny fanjakana momba ny kalitaon’ny orinasa. dingana (araka ny nahazoana alalana) manatri-maso ny fanekena.
Jereo koa: Inona no atao hoe fifanarahana asa? Modely fifanarahana asa farany
III. Zavatra vitsivitsy tokony ho fantatra momba ny fitiliana fanekena araka ny dingana
1. Fomba fitiliana fanekena manokana
Ny fampahalalana etsy ambony dia namela anao hahatakatra ny atao hoe fitsapana fanekena anglisy, inona ny minitra fanekena anglisy. Dia tongava eto, ndao hojerentsika miaraka amin’ny 123job hoe inona ny test de acceptance anglisy? Ao anatin’izany ny dingana lehibe 3 izay tsy maintsy jerena sy ekena amin’ny asa fanorenana, avy eo ny fitsapana fanekena amin’ny dingana fivoriambe mba hamitana ary farany ny fanekena ireo entana vita amin’ny fanorenana, minitra fanekena santionany. . Ka inona araka ny hevitrao no asa napetraka hampiroboroboana ny fizotry ny fanekena ny teny anglisy?
Avy eo dia misy ireto fepetra manaraka ireto apetraka amin’ny fanadihadiana momba ny horohoron-tany momba ny asa fanorenana, ny fianarana momba ny fitaovana fampidirana sy ny fanaovana fivoriambe, ny fandefasana ary ny fisafoana. Raha ny marina, rehefa manatanteraka ireo asa ireo dia tsy maintsy jerena ihany koa ny fiantohana ny tena sata misy ny trano ary koa ny rafitra fanohanana. Satria, raha azo antoka fa azo antoka ny rafitra, dia azo antoka ihany koa ny kalitao amin’ny ho avy.
READ Tổng hợp cách sử dụng hàm MID trong excel từ cơ bản đến nâng cao | Anybook.vn
Job Inona no atao hoe fitsapana fanekena anglisy?? Noho izany dia momba ny kalitao sy ny habetsaky ny fitaovana foana izany, ary koa ny fanamarinana raha mifanaraka amin’ny famolavolana ny fitaovana? Satria ireo tombana ireo dia hisy fiantraikany mivantana amin’ny fanatanterahana ny dingana manaraka, raha ratsy ny vokatra dia mila amboarina. Ary mazava ho azy, taorian`ny fanekena ny teny anglisy dia zavatra izay misy fahadisoana, na manana fiantraikany tsy misy dikany na tsy misy vokany, dia ilaina ihany koa ny manao tabilao statistika, mirakitra an-tsipiriany momba ny fotoana nalaina. Aorian’izay, tohizo ny fanaovana ny andrana fanekena, ary tsy maintsy tompon’andraikitra amin’ny fanamarinana sy ny fandraisana ireo fahadisoana voamarika ihany koa.
2. Inona no antontan-taratasy takiana amin’ny fanekena ny tetikasa?
Mba hamaritana ny kalitaon’ny asa dia ilaina ny manana firaketana fitsapana fanekena, ao amin’ny dosie misy firaketana. Inona no atao hoe fitsapana fanekena anglisy?? Ary inona no santionany amin’ny minitra fanekena anglisy:
Inona no antontan-taratasy takiana amin’ny fanekena ny tetikasa?
Araka ny fitsipika, inona no santionan’ny firaketana fanekena anglisy?
Taratasy miaraka amin’ny fanekena ny fanorenana
Taratasy lanja misy fanamarihana momba ny fitaovana
Ny fomba fiasa miaraka amin’ny tanjona hotratrarina sy ny vokatra azo
Statistika amin’ny antsipiriany momba ny fahadisoana….
Taratasy tsy maintsy atao amin’ny fomba fanekena amin’ny dingana rehetra amin’ny fanorenana ireo, na izany aza, misy koa ny antontan-taratasy maro hafa ilain’ny fanekena toy ny: antoka ny antontan-taratasy aroso, ny antontan-taratasy momba ny toromarika ara-teknika, ny diary fanaraha-maso…
Jereo bebe kokoa: Ny antsipirihan’ny fomba fanaovana ny maodely fanolorana ny tranokalan’ny fanorenana farany
IV. Fepetra hanaovana ny andrana fanekena ny tetikasa
Amin’ny alàlan’ny fampahalalana etsy ambony dia fantatsika hoe inona ny fitsapana fanekena amin’ny teny anglisy, inona ny firaketana fanekena anglisy ary inona no santionan’ny firaketana an-tsoratra anglisy? Ny anjara asany dia ny miantoka ny fiarovana, tsy momba ny fananana ara-batana ihany, fa ny fiarovana ny ain’olombelona no zava-dehibe kokoa. Ka inona no tanjon’ny andrana fanekena anglisy, dia ho an’ny asa fanorenana dia misy fepetra hentitra tokony hatao, mba hiantohana ny kalitaon’ny asa fanekena, ary koa hisorohana ny toe-javatra. .
Inona no lohahevitra momba ny fanadinana fanekena anglisy? Ireo dia asa fanorenana, na ampahany amin’ny asa (toy ny: kojakoja ara-drafitra, dingan’ny fanorenana, zavatra momba ny asa), fitaovana, ary milina mifanaraka amin’ny famolavolana natao.
– Ho an’ny asa fanorenana tsy vita (tokony hofaritana ny haavon’ny fahavitan’ny asa), saingy tsy misy fiantraikany amin’ny faharetana sy ny fampiasana ara-dalàna ny asa fanorenana, Inona no atao hoe fitsapana fanekena amin’ny teny anglisy miaraka amin’ireto dingana manokana manaraka ireto. :
+ Voalohany, ilaina ny manao latabatra statistika amin’ny singa tsy vita, na ny mari-pamantarana kalitao sisa, ary tsy maintsy milaza mazava ny fe-potoana, ary koa ny fepetra fanarenana.
+ Manaraka izany, miaraka amin’ireo mpandray anjara rehetra, dia tompon’andraikitra hatrany amin’ny fanaraha-maso sy ny fanaraha-maso ny fanamboarana, ary koa ny famahana ny olana momba ny kalitao voalaza etsy ambony.
READ Cách dùng kết hợp hàm index và match trong excel để lọc thông tin | Anybook.vn
Fepetra hanaovana ny andrana fanekena ny tetikasa
+ Farany, diso indray ny fanatontosana ny andrana fanekena anglisy taorian’ny fanamboarana ireo lesoka voalaza etsy ambony ireo ary noresen’ny mpandraharaha.
– Raha toa ka manana milina sy fitaovana miasa ny asa fanavaozana, inona ny fenitry ny fanekena amin’ny teny anglisy, dia mila manaraka ny fenitra ara-teknika fampandehanana mba hiantohana ny fampandehanana ny vondrona ary koa ny fitsipika momba ny fiarovana, ny fahadiovana ary ny fitsipika anatiny.
– Raha misy fanamboarana indray ny zavatra na ny asa na ny fanovana ny famolavolana sy ny fametrahana ny milina sy ny fitaovana, dia ilaina ihany koa ny manao andrana fanekena amin’ny teny anglisy momba izany zavatra izany.
– Raha toa ka afindra any amin’ny mpandraharaha hafa ny entana na ny asa ho amin’ny fanorenana manaraka, dia nekena niaraka tamin’ny mpiantoka taloha izy ireo, dia mila mandray anjara amin’ny andrana fanekena amin’ny asa fanorenana, ary koa ny rafitra fanorenana, ary ny ampahany. ny asa fanorenana alohan’ny handrakofana azy.
Jereo bebe kokoa: Famintinana ny minitra fandraisana santionany mafana indrindra androany
V. Fanamarihana ho fantatra rehefa manao ny fanadinana fanekena
Inona avy ireo fanamarihana sasany rehefa manao ny andrana fanekena anglisy? Inona no tokony ho marihina amin’ny minitra fanekena, inona no santionan’ny minitra fanekena anglisy?
Ny fanamarihana voalohany dia amin’ny fakana santionany hanaovana fitiliana dia ilaina ny manao firaketana santionany araka ny fitsipika, ary miaraka amin’izay koa, tsy maintsy arahin’ny solontenan’ny mpanara-maso sy ny antoko mpanao fanorenana. Ny santionany amin’ny firaketana fanekena dia tsy maintsy mirakitra mazava sy feno ny fampahalalana momba ny fanondroana santionany, ny habetsahan’ny santionany, ary ny marika santionany, ny fotoana ary ny rafitra mifandraika amin’izany.
Manaraka izany ny fanamarihana momba ny tokony hanaraka ny fitsipika momba ny isan’ny santionany, aza maka kely na be loatra ny santionany satria hisy fiantraikany amin’ny valin’ny fanadinana fanekena anglisy izany na ho very maina.
Aorian’izay dia takiana ny fandraisana ny santionany fanolorana eo amin’ireo antoko mitondra ny santionany fitsapana, ao anatin’izany ny roa tonta izay hanao ny fanekena ny valin’ny fitsapana, ary tsy maintsy atao any amin’ny laboratoara manana fitaovana ampy. fanekena. Na koa ilaina ny mitahiry ny firaketana amim-pitandremana araka ny fitsipika navoaka.
Ny fanadinana fanekena amin’ny teny anglisy dia atao hatrany araka ny asa manokana tsirairay, ny singa tsirairay na firaketana fitsapana Ny teny anglisy dia voalaza mazava sy feno ary marina foana momba ny anarana sy ny zavatra voalaza ao amin’ny endrika.
Fanamarihana ho fantatra rehefa manao ny andrana fanekena
Fanamarihana momba ny famaritana ny andraikitry ny mpampiasa vola amin’ny fandraisana andraikitra amin’ny valin’ny fitsapana.
Farany, ankoatra izany, ny mpampiasa vola ihany koa dia tompon’andraikitra amin’ny fangatahana ny consulting and design organizations mba hanome antontan-taratasy mba hahazoana antoka fa ny fitaovana dia azo ampiasaina sy ampiasaina araka ny tokony ho izy, ary koa hiantohana ny fahavitan’ny tetikasa.
Jereo koa: Inona ny firaketana fanekena? Ny maodely tatitra momba ny fanekena matihanina indrindra
Ny fampahalalana etsy ambony nomen’ny 123job dia manazava mazava tsara ny atao hoe fitsapana fanekena amin’ny teny anglisy sy ny fampahalalana fototra toy ny hoe inona ny firaketana fanekena amin’ny teny anglisy, inona ny santionan’ny firaketana fanekena amin’ny teny anglisy. Manantena fa fahalalana mahasoa momba ny atao hoe fanekena anglisy, ohatra Inona ny firaketana fanekena anglisy? izay nozarain’ny 123job taminao, mba hanampiana anao hahita asa ary koa ho an’ny fiainanao andavanandro!
Previous: Cách viết đơn xin nghỉ việc Tiếng Anh hay và chuẩn nhất hiện nay. | Anybook.vn
Next: Chùm thơ chúc mừng sinh nhật hay, tình cảm, vui nhất | Anybook.vn